Noelin’ny Ankizy 2016
Andian’ny faha dimy (5eme édition)
Notanterahana ny 23 desambra 2016 ny noelin’ny ankizy andiany faha dimy, izay hetsika karakarain’ny Radio Voanio, fanaiony isan-taona hoentina ampifalifaliana ireo ankizy.
Niavaka kely izy tamin’ity taona ity satria dia nisy ny fiaraha-miasa tamin’ny sekolim-panjakana manana ireny pr�scolaire ireny izay miisa 6 teto Toamasina dia ny EPP La Foire, EPP Manangareza, EPP ZOTO, EPP Todivelo Raphael, EPP Analamboanio, EPP Maurice Guyot.
Nampiavaka ny noelin’ny Ankizy tamin’ity taona ity isantaona tokoa mantsy satria feno fifangaroan’ny ankizy avy amin’ny sekoly maro, izay noentina anatsarana ny fetin’ankizy sy mba hoentina anomezana ny fahafaham-pon’ny rehetra. Ankizy miisa 30 no niara-nidola, niara-nifaly, niara-nialahetaheta.
Nafana ny lalao, ny dihy, ny tsinjery sy ireo fampiseohoana nataon’ireo ankizy, indrindra fa teo amin’ny fahatongavan’ny dadabe noely, orakoraka tsy nisy toy izany ny an’ireo ankizy. Toy ny mahazatra, dia niaraka nandihy tamin’ny ankizy ihany koa i dadabe noely. Rehefa vita izany rehetra izany dia nizara kilalao, vatomamy sy biscuit ho an’ny ankizy ihany koa dadabe noely. Hafaliana torak’izany ny tamin’ireo Ray amandReny izay nitondra ny zanany sy nanatrika ny lanonanana.
"Izahay eto amin’ny Radio Voanio dia Mirary fety Sambatra ho an’ny mpakafy sy ny rehetra "
(144) Lantomalala : 24-12-2016 - 08:45